Vaovao - Fitaovana fikolokoloana, fantsom-borona fananganana, fantsom-boaloboka, fantsom-boaloboka nandrisika, fantsom-bozaka vy
Vaovao farany miresaka momba ny vidin'ny mpampitohy vera rano dia in-2 an'ny mpampitohy ny fasika.
Noho izany ,mpiara-miasa maro hahatsapa ho very hevitra, maninona izahay mbola misafidy ny fizotran'ny vera?
Mamelà ahy hiteny aminao momba ny olana sasany amin'ny tora-pasika mpampitohy eo amin'ny tsena ankehitriny:
01. Miseho ivelany
Ny kalitaon'ny fisehoana amin'ny lafiny iray dia ny fisehoan'ny vokatra rehetra amin'ny ankapobeny MAHANTRA, mivantana kokoa, ny boky firaketana dia ho be ny fitrandrahana famoahana rano amin'ny galvanizing dingana, satria ny marokoroko loatra ny etona,, io dia ho mampihena ny androm-piainan'ny vokatra.
02.Pore ​​anatiny maro
Ny olan'ny pore anatiny dia miseho amin'ny lafiny roa:
1) Ny pores dia misy eo amin'ny fototr'ilay mpampitohy, izay hanao antony ny mason-koditra ao amin'ny seam lasitra ary misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny welding rehefa mihodina amin'ny fantsona;
2) Ny fisian'ny pores dia mampihena ny tanjaka ankapobeny an'ny mpampitohy, miteraka fahasimban'ny mpampitohy ary miteraka ny sisa amin'ny manontolo masiaka natao tamintsika.
03.mihoatra noho izany Burr, fifehezana ny refy tsy voafaritra
Betsaka no miditra ao mpampitohy tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fisehoana fotsiny, fa misy akony amin'ny tadin'ny mpiasa mandritra ny fandidiana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiatraikany amin'nymanangana. Raha ny burrs diatsy nesorina SY natsangana ara-potoana, ny kalitaon'ny ankapobeny aorian'ny welding dia tsy afaka mahafeno ny fenitra, izay misy fiatraikany amin'ny kalitao sy ny fiarovana ny vokatra.
Araka ny zavatra niainantsika, ny mpampitohy vera rano dingana amin'ny famolavolana fanariana, dia famolavolana iray, ny firafitra ankapobeny dia somary marin-toerana; Ao amin'ny dingan'ny famafazana fasika mpampitohy, misaraka ny bobongolo.
Miorina amin'ireo antony etsy ambony ireo dia mihamaro ny mpanjifa misafidy ny vera rano mpampitohy miaraka amin'ny vidin'ny singa.